Beesha Caalamka oo war kasoo saartey Shirka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
30 November 2020 Kooxda Al-Shabaab oo ka faa’ideysaneysa habacsanaanta NISA
Beesha Caalamka oo war kasoo saartey Shirka Muqdisho
Saaxiibada caalamku waxay ka codsadeen madaxda Soomaaliya inay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo himilooyinka dimoqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed xilligan taariikhiga ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Saaxiibada Soomaaliya ee beesha Caalamku ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u bilaabashada wadahadaladii u dhaxeeyay DFS iyo shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah Federaalka.
Qoraal ay si wadajir ah usoo saareen Maanta ayay ku ammaaneen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo’ iyo Madaxweynayaasha Maamullada ka-qaybgalka shirarkan muhiimka ah ee ka socda Muqdisho maalintii labaad.
Waxay ku boorrinayeen hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay si buuxda uga wada-hadlaan si dhab ah oo ujeedkiisu yahay in heshiis ballaaran laga gaaro qaab doorasho oo lagu kalsoonaan karo, lana hirgelin karo.
Farmaajo ayaa loogu baaqay inuu saamileyda kale, sida Xisbiyada Mucaaradka iyo Bulshada rayidka lagu soo daro shirka, iyadoo wadahadalladu sii socdaan, si loo ballaariyo taageerada heshiiska iyo hirgelintiisa.
Kooxda Al-Shabaab oo ka faa’ideysaneysa habacsanaanta NISA
Warar 30 November 2020 16:57
Tobaneeyo ka tirsan Kooxda Argagixisadda ah ee Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo galay gudaha Magaalada Muqdisho, sida Keydmedia Online ay ka ogaatay laamaha amniga.